Shirkadda TELESOM ee Horyaalka Isgaadhsiinta oo Wacdaro ka muujisay Xuskii 18-ka May | Salaan Media
Shirkadda TELESOM ee Horyaalka Isgaadhsiinta oo Wacdaro ka muujisay Xuskii 18-ka May
Hargeysa (Somaliland.Org) -Shirkadda Isgaadhsiinta Casriga ah ee Telesom ayaa si wayn uga qayb qaadatay dabaal deggii xuskii 18 May ee 2013. Xuskan oo ahaa kii ugu waynaa ee abid Somaliland qaranimadeeda sidan oo kale looga xuso.
Xafladdan waxaa ka soo qayb galay kumanaan kun oo ciidamada qalabka sida oo ku gaashaaman hubka noocyadiisa kala duwan iyo maalaayin qof oo dadweynaha Somaliland ka mid ah oo si wayn u
muujiyadda Qaranimadda Somaliland. Shirkadda Telesom ayaa suurto galisay in si toos ah looga daawado gudaha dalka iyo daafaha aduunka Xafladda 18 May 2013 oo ka socotay xarunta madaxtooyada maalinimadii iyo habeenimadii.
Shirkadda Telesom ayaa suurto galisay in si toos ah looga daawado xafladda 18 May guud ahaan dalka oo dhan iyo Caalamka iyadoo adeegsatay Telafishanada iyo shabakadaha wararka.
Dhank kale dhamaan xarumaha shirkadda Telesom ay ku leedahay goboladda dalka ayaa si wayn loogu soo bandhigay astaamaha 18 May. Sidoo kale waxa baddi la fasaxay shaqaalaha shirkadda Telesom marka laga reebo tiro kooban oo heegan ugu jiray in ay bulshadda u fidiyaan adeegyadda aasaasiga ah ee dadweynuhu u baahan yihiin. Shirkadda Telesom waxay sidoo kale samaysay qiimo dhimis 50%, taas oo u suurto galisay in bulshaddu si fiican oo hufan u wadda hadli karaan.
Shirkadda Telesom waxaa kale oo ay xoogga saartay oo ay kor u qaaday tayadda isgaadhsiinta iyo adeegyadda kale ee ay shirkaddu bulshadda weynta Somaliland u fidiso, waxaanay bulshaddu si wayn uu la dhaceen adeegyadaa shirkadda Telesom.
Dadweyne aad u tiro badan ayaa si fudud oo xawaarihiisu sareeyo uga daawanaayey xuska 18 May mareegaha wararka iyo shabakaddaha bulshadda sida facebook-ga oo ay dadku links live-ka ah ay iska waydaarsanaayeen.
Maamule Ku-xigeenka Waaxda Xidhiidhka Dadweynaha iyo Suuq-gaynta ee shirkadda Telesom Muddane Maxamed Cabdi Darbo ayaa ka waramay dareenkiisa ku saabsan xuska dabaal-degga maalinta 18 May iyo sida Shirkadda Telesom uga qayb qaadatay baahinta maalintan isagoo ka waramaya waxaa u yidhi, “?Run ahaantii maanta shucuurtaydu aad bay u kacsan tahay, waa maalin si wayn loo xusay. Waa maalin aan loo kala hadhin oo shacabkeenu si wayn uga soo qayb galay. Shirkad ahaan waxaanu u hambalyeynaynaa shacbiga Somaliland ee u soo baxay xuska sanad-guuradda 22-aad ee 18 May anagoo u rajaynayna ictiraaf iyo horumar lagu badhaadho.”
Shirkaddu si ay ula qaybsato dareenka shacbi weynaha Somaliland ee ku kala nool dunida oo dhan, waxaanu u suurto galinay in ay si toos ah ula socon karaan xuska 18 May dhinacyada Telefishanada iyo shabakadaha wararka. Sidoo kale waxaanu ku dadaalnay in aanu xoojino adeegyaddii kale duwaan ee xaga Internet-ka, ZAAD-ka iyo xaga hadalkaba. Si aanu bulshadda ugu fudaydino hawlaha culusayska badan ee ay maalintan oo kale leedahay?.
Barnaamijyadda baahinta Tooska ah ayaa inta badan saamayn ku yeesha isticmaalka Internet ee bulshada balse shirkadda Telesom arintaasi way ka hor tagtay, waxaanay suuro galisay in si toosa ahna loo daawo, sido kalena ay bulshadu hesho internet aan hakad iyo dib u dhac toona aan galin hawl maalmeedkooda muhiimka ah.